Masakadza to call it quits from International cricket - Cricingif
Masakadza to call it quits from International cricket
Zimbabwe captain Hamilton Masakadza has announced he is set to retire from all forms of international cricket after the end of the T20I tri-series involving Bangladesh and Afghanistan later this month. This will mark the end of an illustrious 18-year old international career.
"After a great deal of consideration, I have decided to announce my retirement from all formats of international cricket at the end of the upcoming triangular series in Bangladesh," Masakadza said at a press conference at Harare Sports Club.
Masakadza has played 38 Tests, 209 ODIs and 62 T20Is for Zimbabwe since making his international debut against West Indies in 2001, scoring 9,410 international runs along the way. Masakadza has also hit 10 international tons to go alongside his 42 half-centuries. The veteran is fourth on Zimbabwe's ODI and Test run-getters lists.